यी साधारण तरिकाहरूबाट आफ्नो आईफोनको ब्याट्री स्वास्थ्य जाँच गर्नुहोस् - Technology Khabar
» यी साधारण तरिकाहरूबाट आफ्नो आईफोनको ब्याट्री स्वास्थ्य जाँच गर्नुहोस्
यी साधारण तरिकाहरूबाट आफ्नो आईफोनको ब्याट्री स्वास्थ्य जाँच गर्नुहोस्
Technology Khabar २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार
यदि तपाईं आईफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंले समय-समयमा आफ्नो आईफोनको ब्याट्रीको स्वास्थ्य(Battery Health) जाँच गर्नुपर्छ। यो पुष्टि गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकी कतै आईफोनको ब्याट्री बदल्नुपर्ने आवश्यक त छैन् ? ब्याट्री खराब हुनुको अर्थ आईफोन चार्ज गरेपछि, तपाईँले यसलाई धेरै छोटो समयको लागि मात्र प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
एप्पलले फोनको ब्याट्री स्वास्थ्य जाँच गर्न केहि टूल्स दिएको छ। यी सुविधाहरू आईओएस ११।३ को रिलिजको समयमा कम्पनीले २०१८ देखि सुरू गरेको थियो। तपाईं आईफोन ६ र त्यसपछिका सबै पछिल्लो मोडेलहरूमा यो सुविधा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ आईप्याडमा उहि टूल्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
यस लेखमा हामी तपाईलाई बताउँदैछौं कि तपाईँले कसरी आईफोनको ब्याट्री स्वास्थ्य जाँच गर्न सक्नुहुनेछ ।
कसरी तपाईँको आईफोन ब्याट्री स्वास्थ्य जाँच गर्ने?
यसका चरणहरू सुरू गर्नु अघि, यो जान्नुहोस् कि एप्पलले सामान्यतया तपाईँको डिभाइसमा दुई विभिन्न क्षेत्रमा अधिकतम ब्याट्री क्षमता र यसको उच्चतम कार्यप्रदर्शन क्षमताको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
अधिकतम ब्याट्री क्षमताले नयाँ अवस्थाबाट हालको ब्याट्रीको क्षमताको बारेमा जानकारी दिन्छ। अर्कोतर्फ, पीक परफरमेन्स क्षमताले ब्याट्री यसको उच्चतम क्षमतामा चलिरहेको छ कि छैन भनेर मापन गर्न सकिन्छ । । वा प्रदर्शन व्यवस्थापन सुविधाहरूले शिखर शक्ति अवरुद्ध गर्दै छन् कि भनेर।
सबैभन्दा पहिले तपाईको आईफोनको सेटिंग्समा जानुहोस्।
तल स्क्रोल गर्नुहोस् र ब्याट्री Battery विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस्।
अब ब्याट्री स्वास्थ्यमा (Battery Health) ट्याप गर्नुहोस्।
यहाँ तपाईं आफ्नो आईफोन ब्याट्रीको अधिकतम क्षमता र उच्चतम प्रदर्शन क्षमता (म्याक्सिमम क्यापासिटी र पीक परफर्मेन्स क्यापाबिलिटी) देख्न सक्नुहुन्छ।
यदि फोनको ब्याट्री स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको छ भने एप्पल आफैंले पनि महत्त्वपूर्ण ब्याट्री सूचनाहरू प्रदर्शन गर्दछ । र यसका साथै प्रतिस्थापन गरिएको ब्याट्रीलाई प्रणालीद्वारा प्रमाणित गरिएको छैन भने पनि नोटिफिकेसन देखाउँछ ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार
स्मार्टफोन ब्रान्ड पोकोको आफ्नो नयाँ ब्राण्ड लोगो र मस्कट सार्वजनिक
२५ वर्ष अगाडी आजैको दिन: माइक्रोसफ्टले विन्डोज ९५ सार्वजनिक गरेको थियो
दूरसंचार प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना परिवर्तन, दुई निर्देशक पद थपियो, जिम्मेबारी पनि हेरफेर
कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा हेर्न सकिने
एनसेल आजियाटाको एसईई विद्यार्थीका लागि ‘पहिलो सिम’, एक रुपैयाँमा नै प्रिपेड सिम पाईने